Pandora waa maamulka burqanayo music ah waxaad ka heli kartaa bogga internetka iyo iyada oo loo marayo marxalad Pokki ku saabsan desktop. Haddii aad ku cusub tahay, waxa uu, Pandora waa maamul music burqanayo meesha kuu sheegi nidaamka waxa eeg, khabiiro, ama cayn kasta oo muusiko ah oo aad jeceshahay. Waxaa markaas ka dhigi doonaa xarun raadiye oo caado aad u iftiinka Hawadooda aad. Kafaa'iidaysiga hiddawadayaasha Music ah Project, Pandora falanqaynaya doonaa maalka muusikada oo luuq ama nin saanac ahu aad jeceshahay, oo music kale waxaa la ciyaari doonaa in saamiyada tayada qayb sifeeyay ah.
Si ka duwan foomka online, codsiga Pandora Pokki ma aad waajib in la sameeyo a record music mahad ka desktop. Waa inaad sidaas oo kale la taala Maraykanka si uu u isticmaali maamulka xaalad walba. In fursad in aad rabto in aad qorto oo ay leeyihiin Pandora yeeran Hawadooda music aad, nidaamka waa mid bilaash ah oo aasaasi ah. Waxaad samayn kartaa saldhigyada siiyo habayn ah, nooca music, ama xirfadle gaar ah. On fursad off in aadan daryeeli markii music yimaado ilaa aad saldhigga, si fudud hoos ka jaftaa suulka ka qabsado iyo codsiga eegi doonaa in talo mustaqbalka.
Mudnaanta ee Pandora
Diiwaangelinta No loo baahan yahay
Baro music cusub, ayay dhadhan aan joogo
Hagaajinta go'aan laxanka by codeynin eeg in aad jeceshahay
Dhulkeeda ee Pandora
Ads noqon kartaa diiqayo
Hadii aad waligaa dhageystay Pandora oo u rajeeyay in aad u akhriya lahaa, markaa waxaad kala soo bixi waa in. Kolkaasuu mar kale ka sii fiican, download it? Waa wax walaalahayo Apple hanti awood ay ku dhammayn in muddo ah, oo hadda waa ay inoo jeedin. Waxaan la adeegsado doonaa PanDown !, Pandora download macaamiisha ugu horeysay oo final, by XDA qayb ka tirsan z3nful. Iyadoo goolka waa in aad ka faa'iidaysan codsigan, waa in aad la aasaasay, iyo si ay u xaqiijiyaan in aad ka hor inta uusan u soo bandhigid. Waa kulankii Shuruudaha Pandora ee Isticmaalka soo bixi Gurtida.
1. Sida loo sameeyo Pandora music download free on Pandora
2. Sida loo Download Pandora Radio via software
Sida loo sameeyo Pandora music download free on Pandora
Tallaabo 1: Ku rakib iyo Run PanDown!
Ka dib markii aad la aasaasay, ka tago si Store Play iyo dhufsan PanDown. Waxaa jira laba nooc; mid ka mid ah oo lacag la'aan ah oo la dalacsiiyo, iyo mid ka mid ah la bixiyaa iyada oo aan dallacaadaha. Mid ka mid ah ayaa si xor ah u wanaagsan oo dandy ka shaqeeya oo waa isku mid ka badan dallacaadaha kale ah oo kale.
Markii la soo bandhigay, waxa ay kiciyo, hadiyad waxaa xidid u hesho in ay, oo aad loo diyaariyey.
Talaabada 2: Open Up Pandora
Hadda codsiga qaadataa dhawr daqiiqadood inay si qabsadaan si xor ah u bilaabi Pandora. Waxaan isku dayay la qabsashada xaadirka ah, iyo modded, kala duwanaansho u gudub u ballaadhan ka devs Seed Bad Customs iyo Rydah805. Waxaa ku nool ilaa laga filayo cabsi badan labada.
Talaabada 3: Saarashada Songs
Marka aad bilowdo ciyaaro eeg, aad arki doonaa qaab daraysid in PanDown. Waxanu wuxuu ka mid, codsigan sidaas awgeed ma magacaabi karo tareenka. Sidaas darteed, waxaad leedahay qabsado Download iyo qabsado Play ah. Sidaas, waraaqaha waxa uu noqon doonaa in aad baqshadda Download, oo aad iyaga u ciyaari karaa sida qaar ka mid ah oo kale MP3.
Anigu ma aan aqoonsan ha xatooyo sidaas ma isticmaali wajigan si ay u sii ka soo bixinta music. Waa in aad si fudud u isticmaali this marka aad maqli luuq ah, oo aad u baahan tahay in si degdeg ah mar kale ka ciyaaro. On fursad off in ay tahay wax aan run ahaantii jeclaan iyo heshiis on mar kale hal maalin oo dheeraad ah u ciyaaro, waan soo iibsan doonaa laxanka. Sidaas darteed, tani muhiimad ahaan waa kaliya awood rehash buunbuuniyey ii, tan iyo Pandora waa yaridu oo la xiriira mid ka mid ah. Waxaad dhegaysan kartaa ama dib u eegaan track ah si ay u kala saaro, si aad si haboon u magacaabi karaa.
Sida loo isticmaalo TunesGo Wondershare in Download Pandora Radio
Tani dulmar cusub waa run ahaantii wanaagsan. Waxa kale oo aad ka heli karto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan eeg, rag saaniciin ah ku ool ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa dhibtaa qof si ka badan waa in downloader aad kala soo bixi music ka Pandora isticmaali ku guuldareysto inuu mar dambe u shaqeeyaan. Waa maxay iska leh? Ma jirtaa hab inay muusikada Pandora? Iyadoo shaki la'aan iyada oo habka loo mariyo Pandora.com, hal-abuurka ka dheefsashada, iyo cayayaanka yar ayaa loo beddeli karin. On hal gacan, aad ku faraxsantahay yaabaa music effortlessly oo dhan dheeraad ah oo ku Pandora.com. Kolkaasuu mar kale, aad downloader waa dhacsan. Degsado music Pandora mar dambe ma aad sida sahlan yahay sidii hore. Iska in maadaama ay dhici karta, anigu waxaan ahay maroojin nasiib. Waxaan ogaaday in hab si weyn u fudud in ay Pandora music download. Halkan waxaan doonayaa in aan laga yaabaa in ay u siiyo in aad.
Wax kasta oo aad u baahan tahay waa TunesGo ah. Waxaan ka hufan doortay seddex ka mid ah rikoorrada ugu fiican si aad tixraac. Sidee ku saabsan aynu eegno barta ay isbarteen dhibic apparatuses iyo sida ay ula isticmaalka iyaga inay muusikada Pandora.
Step1.Install iyo TunesGo tagaasida
In la isticmaalo xiriirka ka kor ku helay in ay soo baxdo iyo bandhigo TunesGo ah. Sii wad in aad dirto codsiga waxaa la soo bandhigay ka dib. Soo qaado dhexeeya foomamka Windows iyo Mac, sii korkiisa nooca PC aad leedahay.
Tallaabada 2. Ku bilow inaad kala soo baxdo music Pandora
Laga soo bilaabo suuqa kala mabda, guji oo taariikhqorihii ahaa qabsado leh. Taas ka dib, ay sii wadaan in ay Pandora daba jooga ah oo uu u ciyaaro habayn aad go'aan.
Waa in kala labaad bilaabi doonaa diiwaan luuq iyo markii ay samaynayaan, si fudud ka jaftaa qabsado isla taariikhqorihii si loo soo afjaro nidaam rasmi ah. Dhibcood Khusayso oo xiiso leh ee la xidhiidha luuq waxaa sidoo kale eegay si dabiici ah. Kuwaas oo ay ku daraan magaca ururinta iyo faafinta, magaca nin saanac ahu ee, iyo meelaha kale ee dalka Switzerland oo xiiso leh
Tallaabada 3. Exchange music Pandora in ay Lugood.
Dooro music iyo dhaqso ah jirayba Add to Lugood muuqday sawir ku saabsan mudnaanta. Halkaa marka ay marayso in, Lugood laftiisa soo diraan si ay u muujiyaan music ah.
Top 10 Artists Qadiimiga ah.
> Resource > Music > Pandora Music Download Free ka Pandora